Ikhonkco Ivula i-Floodlight Cam i-Wired Pro, ikhamera entsha yokujonga ngaphandle | Ndisuka mac
Namhlanje kukho imakethi enkulu ngokwenene yeekhamera zokhuseleko kunye neRingi inekhathalogu elungileyo yeemveliso ezikhoyo. Ezi khamera zeRing zibonelela ngexabiso elifanelekileyo ngokwenyani lemali kunye nenkqubo yazo yendalo yenza kube lula ukwenza umnatha wakho wokhuseleko yeofisi, eyekhaya okanye efanayo.
Ngoku i-Ring firm isungula ikhamera entsha ye-Floodlight Cam Wired Pro esekwe kwimisebenzi yenguqulo yoqobo ye-Floodlight Cam njengokujonga indawo ezingaphandle nezibane ezisebenzayo ze-LED kodwa zongeza Ukuchongwa kwentshukumo ye-3D, umbono wasemoyeni kunye nokunikezela ngolwazi oluninzi Malunga nento eyenzekayo kufutshane nekhamera.
UJamie Siminoff umdali kunye nomsunguli weRingi Ucacise kumajelo eendaba:
Iminyaka emine eyadlulayo, siphinde saphinda sakhanya indawo yokukhanya eqhelekileyo kwi-Cam ye-Floodlight yoqobo, ngoku sizisa izinto ezinqabileyo kwisixhobo nge-Floodlight Cam Wired Pro.Ngokwandisa umbono wethu womoya kunye netekhnoloji yokufumanisa intshukumo ye-3D, sinika abasebenzisi umbono omkhulu wento eyenzekayo kumakhaya abo ukuze babe noxolo lwengqondo.
Le Cam ye-Wired Pro entsha ye-Floodlight ke iba yeyona khamera iphambili kakhulu kuluhlu lonke lweeRingi zeemveliso ezibonelela nge-3D yokujonga intshukumo kunye nembono yomoya, ikwafaka umbono we-siren kunye nombala wobusuku. Ikwabandakanya ukusebenza okutsha okubizwa ngokuba yiAudio +. Ngokusengqiqweni, inokudityaniswa nge-Wi-Fi kwaye unokubona yonke into kwi-mobile app okanye nakwesiphi na isixhobo esine-Alexa.
Olu hlobo luhlaziyiweyo lwe I-Floodlight Cam Wired Pro iya kufumaneka ukuthengwa kwiinyanga ezizayo ze- € 249 en Ring.com Kwaye kunjalo kwiAmazon.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Iringi isungula uMkhukula oKhanyayo weWired Pro, ikhamera entsha yokujonga ngaphandle